ကမ္ဘာကျော် Hacker အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Anonymous အဖွဲ့ရဲ့ သိကောင်းစရာများ - Myanmarload
ကမ္ဘာကျော် Hacker အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Anonymous အဖွဲ့ရဲ့ သိကောင်းစရာများ
လွန်ခဲ့သော ၁ လ က 14:57 February 12, 2021
ပရိသတ်ကြီးရေ ခုဖော်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်ကြီး Hacker တွေထဲက တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Anonymous အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hacker ဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီး သိတဲ့အတိုင်း အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် လျှို့ဝှက်ပိတ်ချထားတဲ့အရာတွေကို အဆင်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ ဖွင့်ချပြီး ရယူတဲ့သူတွေကို Hacker လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ Anonymous ဆိုသည်မှာလဲ အမေရိကန်က တုန်လှုပ်ရလောက်အောင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ Hacker အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Anonymous အဖွဲ့ဟာဆိုရင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက 4Chan ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အငယ်စား‌ေလး တစ်ခုကနေ ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလူတွေစသိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ ၂၀၀၈ခုနှစ်တုန်းက Project Chanology ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ လူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အစိုးရတွေအတွက်တော့ အန္တရာယ်ရှိပေမယ့် ပြည်သူလူထုတွေကတော့ သူတို့ကိုထောက်ခံပြီး အားပေးလျက်ရှိပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FBI တို့လိုအဖွဲတွေတောင်မှ Anonymous အဖွဲ့ကို မဖမ်းနိုင်ပါဘူး။ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ လက်စွဲစကားကတော့ " We Are Anonymous " ဖြစ်ပြီး ပုံစံကတော့ ခေါင်းမပါတဲ့ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးအနေနဲ့ကတော့ " V For Vendetta " ဆိုတဲ့ကားထဲက မျက်နှာဖုံးကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ Anonymousအဖွဲ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကတော့ Anti-cyber-surveillance, Anti-cyber-censorship, Internet activism, Internet vigilantism တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုဆိုရင်လဲ ပျောက်ကွယ်နေရာကနေ တစ်ဖန် ပြန်လည်ပေါ်လာပြီဖြစ်ကာ အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: World List
"Myanmarload's content is copyrighted and only allowed to appear on Myanmarload website. Please respect our copyrights"
Myanmarload မှရေးသားသောသတင်းများသည် Myanmarload၏ မူပိုင်သတင်းများဖြစ်ပြီး Myanmarload Website ထဲတွင်သာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မူပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားသောအားဖြင့် တစ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြခြင်းမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို သဝန်တိုအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အများသုံးသန့်စင်ခန်းထဲမှာ စိတ်ကူးဉာဏ်တွေကွန့်မြူးထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်လက်ရာများ
ပြန်လမ်းမရှိ ပြန်လမ်းပျောက်သွားစေမဲ့ ကမ္ဘာ့ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံက တစ္ဆေသစ်တော
လူမျိုးစုတစ်စု ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းပြီးပဟေဠိဆန်သော လက်ရာများ
မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့အတိုင်း ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင် လူထုလှုပ်ရှားတွေကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေကြတဲ့ ပြည်သူများ
နေစရာအိမ်မရှိလို့ လမ်းပေါ်မှာပဲအဆင်ပြေသလိုနေထိုင်စားသောက်နေရတဲ့ ဦးလေးကြီးကို စေတနာရှေ့ထားပြီးကူညီဖေးမပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ဦး
ကိုယ်ဝန်မပေါ့မပါးနဲ့ စျေးခြင်းတောင်းခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးရုန်းကန်နေရတဲ့ (၁၆)နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး
လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ အိမ်ထောင်စု (၁၅၀) အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ကူညီ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော်
About us Archived articles
Copyright © 2017 Myanmarload. All rights reserved.
Page generated in 0.1396 seconds with5database query and6memcached query.